Indlela eNtsha yokuBulala iNkampani yakho | Martech Zone
NgoLwesithathu, Novemba 17, 2010 NgoMgqibelo, Oktobha 29, 2011 Douglas Karr
Ngobusuku bendikwingxoxo eshushu kunye nomcebisi wam. Ayothusi into yokuba bendishushu ... hayi umcebisi;). Eyona nto ibalulekileyo kwingxoxo ibiyinkampani esinomdla kuyo sobabini. Inkxalabo yam ngenkampani kukuba bayiyo ukuhambisa ngesithembiso sesisombululo sabo. Ingxoxo yakhe kukuba ukholelwa ukuba bobabini ezintsha Kwaye baphumelele ekubambeni iso labaphembeleli abaphambili kolu shishino.
Ubuchule buhle kakhulu. Injongo yakho akufuneki ibe ezintsha, Injongo yakho kufuneka ibe luncedo. Ividiyo: Ukusuka Imiqondiso engama-37, UJason Fried kwi-Innovation
Ndiyavuma ngentliziyo yam yonke.
Phambi kokuba intloko yakho iqhume… iluncedo unako yenza izinto ezintsha. Kodwa ukwenza izinto ezintsha akusoloko kuthetha ukuba kunjalo luncedo. Inkampani esithetha ngayo yinkqubo yolawulo lomxholo eyenza ukupapasha kunye nokuququzelela umxholo lula kwaye kulungiselelwe iinjini zokukhangela. Liqonga eliqinileyo eliliwa elinesiseko esingakholelekiyo. Phosa iqela lababhali bemixholo kuyo kwaye banokupapasha ngaphandle kwamandla.
Ingxaki kukuba, rhoqo, umxholo ayilungiswanga. Ngokuchasene noko, kukho ezinye izithuba ezinkulu ekusebenziseni okunciphisa amathuba omxholo wokufakwa kwisalathiso ngokufanelekileyo ziinjini zokukhangela. Ngamanye amagama, iqonga linjalo ayiloncedo.
Umcebisi wam uvumile ukuba bayasokola xa befakwa egumbini nabafana be-SEO abavela kwiinkampani. Ewe kunjalo! Kutheni emangalisiwe nje? Ukuba ulahleka ezinye zezinto ezisisiseko zokwandisa iqonga lakho, uya kuphulukana nentengiso kumfana wangaphakathi we-SEO ngalo lonke ixesha. Kwaye kufanele.
Ukugxila kwenkampani bekukho konke malunga ne-intanethi elandelayo yokubamba i-webinar, inkokeli yeshishini eya kuthi ishukume kunye nayo, umbhali wokukhuthaza ishishini, umntu oza kuhlawula ukuze ahlawule, okanye into entsha yokwenza ithemba. Ngokoluvo lwam olunyanisekileyo, ndiyakholelwa ukuba onke la maqhinga yinkcitha xesha, amandla kwaye… ekugqibeleni… imali. Ndicinga ukuba inkampani yenzela abathengi bayo kakubi ... kwaye iyayihlawulela. Abaphili ngokuvisisana nolindelo abalubeke kwinkqubo yokuthengisa… ukuba bekunjalo luncedo.
Ngenxa yoko, inkampani yabo ayikhuli kwinqanaba lokunye ukuqalisa okusempilweni. Ngokuchasene noko, amaqela abo enkxaso akhathazekile, ingeniso yabasebenzi ibiphezulu, kwaye ukugcinwa kwabo kubandezeleka. Yonke into ekhutshiweyo izisa amanqaku amatsha ngakumbi avelisa iingxaki kunye nemingeni.
Konke oku kukhokelela ekubeni igama lenkampani lisemngciphekweni. Ndikhe ndathandabuza ukutyhala iinkampani ukuya eqongeni nangona ndibona amandla amangalisayo kwinkampani. Nje ukuba babuyele kwi luncedo, Andithandabuzi ukuba ziya kuqhuma ekukhuleni.
Okwangoku, nangona kunjalo, ukutsha kuyababulala.
I-imeyile ye-Facebook ingaba ngcono njani